Maitiro Ekutarisana Nechekupedzisira Kwehukama Hweukama | Bezzia
Nehurombo, hukama hune chepfu huri muchiedza chezuva uye hazviwanzo munhu iyeye asina kutambura nazvo imwe nguva muhupenyu. Rudzi urwu rwehukama runogona kuitika mumhuri, pachedu kana nharaunda yebasa. Panyaya yevaviri ava, kuva nehukama hune chepfu hunokonzeresa kuti chisungo chakagadzirwa chisimbe uye mamiriro acho anogona kusagadzikana.
Mhedzisiro nemhedzisiro yekuve neiyi mhando yehukama zvakakomba zvakanyanya, kunyanya zvine chekuita nezvepfungwa kana manzwiro. Munyaya inotevera tichazotaura nezve mhedzisiro yehukama hune chepfu uye maitiro ekuzvikunda.
1 Ndeipi mhedzisiro yehukama hune chepfu
2 Zvekuita mushure mekupedza hukama hune chepfu
Ndeipi mhedzisiro yehukama hune chepfu
Kuva nehukama hunotyisa nemumwe munhu kwakaipa kune vaviri uye mhedzisiro yacho inogona kuenderera nekufamba kwenguva kunyangwe kuparara kwehukama. Chimiro chendangariro uye chendangariro chevanhu vazhinji chakakuvadzwa munzira yakakomba uye yakakomba.
Muzviitiko zvakawanda munhu akatambura uye akatambura hukama hune chepfu anotambura zvakakomba zvakadaro sekushushikana, kushushikana, kana kuzviparadza. Iyi mhando ye sequelae inobata zvakananga mamiriro epfungwa emunhu. Kana aya sequelae akasarapwa sezvavanofanira, munhu anovatambudza anogona kukudziridza huturu hunoguma hwakuvadza hukama hweramangwana nevamwe vanhu.
Chinhu chekutanga munhu chaanofanira kuita kuziva zvechokwadi kuti ivo vari mune inotyisa hukama uye saka zvakakosha kuti usiye hukama hwakadai nekukurumidza sezvazvinogona. Nekudaro, iyo yakakosha nhanho ndeye kubata nenzira yakanaka ine dzakasiyana dzakasiyana chepfu manzwiro uye nemanzwiro.
Zvekuita mushure mekupedza hukama hune chepfu
Panyaya yekusiya hukama hune chepfu, zvakanaka kuti uteedzere akateedzana matipi anobatsira iwe kuve nani newe.
Tsamira padenderedzwa rako rehama dzepedyo nemhuri.
Izvo zvakakosha kudzidzira kumwe kufungisisa kana kutandara kukubatsira kuti ubve pane zvese zvisina kunaka pfungwa.
Zvinokurudzirwa kutora nguva uri wega usati waita imwe hukama.
Kana iwe ukaona kuti yako yemanzwiro mamiriro haina kunaka, zvakakosha kuzviisa mumaoko emaoko ehunyanzvi.
Iwe unofanirwa kuisa parutivi manzwiro anogona kuve nemhosva uye tarisa zvakanaka kumberi.
Zvakanaka kuedza kuita shamwari nyowani. kuti ikubatsire kukanganwa hupenyu hwekare.
Pakupedzisira, kudambura hukama hune chepfu mubhudzi harisi basa riri nyore kune chero munhu. Zvisinei zvakakosha kuita saizvozvo, sezvo zvawakakwanisa kuona mhedzisiro uye mhedzisiro yehuturu hwakadai zvakakomba. Pane dzakawanda nguva, munhu akabatwa anounza mumunhu wake kunzwa kwekuzvipa mhosva kwezviitiko zvakaitika mukati mehukama. Kuzvipa mhosva nezvese zvinhu zvinofanirwa kudzivirirwa nguva dzese kubva pachayo, kunzwa uku ndeimwe nzira yehuturu iyo inofanira kubviswa. Kurapa mhedzisiro inogona kuitika kwakakosha kana munhu akabatwa achigona kuvaka zvakare hupenyu hwake uye kunakidzwa nerudzi rwakanaka rwehukama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Psychology » Maitiro ekugadzirisa nemhedzisiro yehukama hune chepfu